३ अभिनेत्रीको टिप्पणी गरेपछि ट्रोलको सिकार बनिन् सोनम – Sanchar Patrika
बलिउडका चर्चित अभिनेता अनिल कपुरकी पुत्री अभिनेत्री सोनम कपुर आफ्नै बोलीका कारण बारम्बार विवादमा पर्ने गरेकी छन् । भने धेरै पटक ट्रोलको सिकार पनि भइन ।पछिल्लो १३ वर्षमा सोनम आफैँले दिएको बयानका कारण उनी विवादमा पर्दै आएकी छन् ।
सोनम विवादमा परेका पुराना किस्सा :
एक पटक सोनम कपूरले अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चनलाई आन्टी सम्बोधन गरेपछि विवादमा परिन । ऐश्वर्याका फ्यानहरु आक्रोशित बनेका थिए ।सोनमको विरोधमात्र गरेनन् । ट्रोल नै बनाए ।
यस बारे सोनमले स्पष्टिकरण दिँदै बुवा अनिल कपुरसँग काम गरेको र जेनरेसन ग्यापका कारण ऐश्वर्यलाई आन्टि सम्बोधन गरेको बताइन । तथापी उनको यो बयानले बलिउडमा निकै हलचल मच्चिएको थियो ।
सोनम कपूरको आफ्नै फेसन सेन्स र स्टाइलका चर्चामा रहने गर्छिन् । यही फेसन र स्टाइलबारे अभिनेत्री परिणीति चोपडालाई टाइट कपडा नलगाउन सुझाव दिइन । अनि फेरि अर्को ट्रोलको सिकार भइन । करण जोहरको कफि विथ करणमा बोल्दै परिणीति चोपडाका पहिरनको सुझाव दिएपछि धेरै आलोचित बनिन् ।
करण जहरको सोहि कार्यक्रममा सोनम कपूरले आलिया भट्टलाई पनि पहिरन सम्बन्धी सुझाव दिइन । उनले आलियालाई आफ्नो उमेर अनुसारको कपडा लगाउनु पर्ने सुझाव दिएकी थिइन् । तर आलियाका फ्यानले यसलाई सहजै पचाउन सकेनन् । त्यसपछि सोनम ट्रोलको सिकार भइन ।
Prevविश्वलाई नै खुशीको खबर ! को’रोनावि’रुद्धको खोप परीक्षण सफल, बजारमा उपलब्ध हुँदै, [ जानकारीको लागी सक्दो शेयर गरौँ ]
Nextअफवाह फैलाउने ४ भारतीय च्यानलको प्रतिबन्ध नहट्ने, अरु आजदेखि खुल्ने
दमौलीमा देखियो प्रहरी नै झस्किने घटना
यतै मृ-त्यु पनि हुन सक्छ, माग पूरा भए काठमाडौं फर्किन्छु : डा. गोविन्द केसी…